Sein Lyan - စိ န် လျှံ: သေဆုံးသွားခဲ့သည်ရှိသော်
Writer Sein Lyan Time 11:37 pm
တစ်နေ့တော့ မိသားစုနဲ့ နေရမှာပါကွာ။
ဟုတ်ပါတယ်..မိသားစုချစ်ခင်သူကြားမှာဖြစ်တာမှ တစ်ကယ့်ကမ္ဘာပျက်တာပါ..း(
မိသားစု အကြောင်းကိုယ် ပြန်ရေးထားတာလေး ဖတ်ရတာ စိတ်ဝင်စားဖို့ သိပ်ကောင်းပါတယ်။ ဟုတ်တယ် ကမ္ဘာပျက်တာ ကမ္ဘာကြီးတခုလုံး ပျက်မှမဟုတ်ဘူး မိမိတယောက်တည်း ဒါမှမဟုတ် မိသားစုအတွင်းမှာလည်း ကမ္ဘာပျက်တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ လူတိုင်းမှာ ရှိနိုင်ပါတယ်။
ကိုဖိုးစိန်ရေ ကိုဖိုးစိန်လိုသားတယောက်ရှိတဲ့မိသားစုလေးကံကောင်းပါတယ်ဗျာ ဆက်ရေးပါဦး မေတ္တာရေစီးချောင်းလေးတွေ
ဖတ်လိုပါတယ် အခြားခြားသော ရေးမည်များကိုစောင့်ဖတ်နေပါတယ်.ခံစားရသောရောဂါလည်းအမြန်ပျောက်ကင်းပါစေဗျာ.
သိပ်မဝေးတော့တဲ့ တစ်နေ့ မိသားစု ပြန်လည်ဆုံဆည်းရမှာပါလေ။
မိသားစုထဲမှာ ကမ္ဘာပျက်တာလည်း ရှိနိုင်တယ်နော်
မိသားစု အမြန်ဆုံး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ စုံစည်းနိုင်ပါစေ...
ဖိုးစိန်ရဲ့ အမေ့နေရာနေဝင်ခံစားပြီး ဖတ်သွားပါတယ်
ပျော်ရွင်ပါစေ တောင်းဆုချွှေ ကဖိုးစိန်ရေ....
ကမ္ဘာကြီးမပျက်တောင်မှ မိသားစုကမ္ဘာငယ်လေးလဲ တချိန်မှာ ပျက်စီးတတ်တာပဲ ကျေးဇူးပါ ငါ့အကိုရေ ဒီအသိလေးတွေ လိုအပ်နေသေးတယ်ဗျာ.. ဘာပဲပြောပြော ဘ၀တလျှောက်လုံး ကောင်းမွန်စွာ ရိုးသားစွာ ဖြတ်သန်းရင်းနဲ့ မိဘ၊မိသားစုအပေါ် အနဲနဲ့အများဆိုသလို ပြုစုစောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့ သားလေးဖြစ်ခွင့်ရချင်ပါတယ်။ ငါ့အကိုလဲ ဒီလိုဘ၀ကို အမြန်ဆုံးအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ပါစေဗျာ..
ဖတ်ဖတ်ချင်း အခုများ ဖြစ်နေတာလား ရင်ပူသွားတယ်။
အောက်ရောက်မှ အပူလုံးကြီးက ကျသွာတာ။
မိသားစုအပေါ်၊ သူငယ်ချင်းတွေအပေါ် ကိုယ်ကျိုးစွန့် အနစ်နာခံ ပေးဆပ်ကူညီတတ်တဲ့ စိတ်စေတနာ ပါရမီက လေးစား အတုယူစရာပါ။
အမေကိုတောင် ပြန်တရားချခဲ့တဲ့ မျောက်ငိုရေ၊ ကိုယ့်မှာ ရှိတဲ့ ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာကိုလဲ ပစ်မထားနဲ့အုံး။ အကုန်အကျခံ ကုသင်တာကု၊ ခွဲစိတ်သင့်ရင် ခွဲစိတ်ကုသပါ။ အပ်လေးနဲ့ ထွင်လိုက်ရင် စူးတဲ့ ဆူး ထွက်သွား ရမဲ့အစား ဆူးကို မထုတ်လို့ အတွင်းလှိုက် စားသွားတာ ခံရတဲ့ အဖြစ်မျိုး မဖြစ်ပါစေနဲ့။
ကိုယ့်စိတ်စေတနာအတိုင်း အကျိုးပေးမှာပါ ဆိုပြီး ကိုယ့်ရောဂါကို ပစ်ပယ်မထားပါနဲ့။ “ကံ” ဆိုတာ “အလုပ်” မှန်းမမေ့လျော့ဘူးထင်ပါရဲ့။
ဆိုင်ကယ်တစ်စီး မောင်းနေသလိုပေါ့။ “ငါ့ကံက ဆိုင်ကယ်အက်ဆီးဒန့် ဖြစ်မဲ့ကံ မပါပါဘူးကွာ” ဆို အကြမ်းမောင်းမယ်ဆိုပါတော့။ ဟာဉ်တိုက်မှု ဖြစ်တဲ့အခါ (ဒါမှမဟုတ်) တန်းမှောက်တဲ့အခါ “ကံပါလာတော့ ခံပေါ့” လို့ ပြောလို့ ရမလား။ ဒီတော့ မဖြစ်လာခင်ကတည်းက ကိုယ်မောင်းတဲ့ ဆိုင်ကယ်ကို ဖြေးဖြေးမှန်မှန် သတိလေးထား ထိန်းသိမ်း မောင်းနှင်ရတာပဲပေါ့။
မိသားစုများ အားလုံး ကျန်းမာ ချမ်းသာကြပါစေ။ စိတ်ခချမ်းသာ၊ ကိုယ်ကျန်းမာနဲ့ ပြန်လည်ဆုံတွေ့နိုင်ကြပါစေ။
3 November 2009 at 04:25
အခုများဖြစ်တာလားဆိုပြီး တကယ် စိတ်ပူသွားမိပါတယ်
ဇာတ်သိမ်းကို မြန်မြန်ရောက်ဘို့ ခပ်မြန်မြန်ဖတ်ရမလား
မဖြစ်စေချင်တာတွေ မြင်ရမှာစိုးလို့ ခပ်ဖြေးဖြေးဖတ်ရ မှာလား တွေးမရခဲ့တာ အမှန်ပဲ။
ကာယကံရှင်က သေခြင်းတရားကို ရင်ဆိုင်ရဲဘုိ့ ရေးနေချိန် ဘေးကဖတ်တဲ့သူက တထိတ်ထိတ် နဲ့ ဖြစ်နေတာဟာ (အနည်းငယ် ဟာသဆန်ပေမယ့် )ခင်မင်မှု သံယောဇဉ်ကြောင့်ပဲနဲ့ တူပါရဲ့
3 November 2009 at 05:03
ဟုတ်တယ် ကိုဖိုးစိန်ကြီးဟီးဟီး.. ရေ..
ကျွန်တော်တို့ တစ်တွေလည်း ဘယ်သောအခါမှ မိသားစုနဲ့ အတူ ပြန်နေရမှန်းမသိဘူးဗျာ..
တစ်ကွဲတစ်ပြားစီ ဖြစ်နေကြတဲ့ မိသားစုတွေ..
ကံအကျိုးပေးကြောင့်လား.. ဘာဖြစ်ဖြစ် သေချာတာတစ်ခုက ဝေးနေကြ.. တစ်ကွဲတစ်ပြား ဖြစ်နေကြပေမယ့် မမေ့ မလျော့တဲ့ ဇွဲ လုံ့လဝိရိရနဲ့ ကြိုးစားပြီး မိသားစုနဲ့ အတူတကွ ချစ်ချစ်ခင်ခင် ပြန် နေနိုင်အောင် ကြိုးစားကြတာပေါ့..
ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့တဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်..
ကိုဖိုးစိန်လည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ပါ... မိသားစုတွေနဲ့ လည်းမြန်မြန် ပြန်လည်ဆုံဆည်း နိုင်အောင်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်.....
ဒီအမေက ဒီသားမျိုးရှိတာ ကံကောင်းလိုက်တာ..
ဟုတ်တယ်. မိသားစုကမ္ဘာပျက်တာကမှ ကိုယ့်အရင်းနှီးဆုံးကမ္ဘာပျက်တာပဲ... တကယ့်ကို နင့်နင့်နဲနဲခံစားရတဲ့ နေ့မျိုးနော်